Ny famonjena dia asan'Andriamanitra - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2018-02 > Ny famonjena dia ny adin'Andriamanitra
Manontany tena aho hoe ahoana no ahitan'ny olona sasany mampihavana ny zavatra ninoany tamim-pahakingana, amin'ny lafiny iray, mino izy ireo fa tena tia an'izao tontolo izao Andriamanitra ka nanirahany an'i Jesosy hovonjena. Amin'ny lafiny iray dia mino izy ireo (miaraka amina finoana matanjaka) ka gaga tokoa Andriamanitra ka manafaka ny olona sy tsy maintsy mandefa azy any amin'ny helo noho ny tsy fahaizantsika. "Voavonjy amin'ny fahasoavana ianao fa tsy amin'ny asa", hoy izy ireo ary marina izany. Manana hevitra mifanohitra amin'ny filazantsara izy ireo fa ny fiafaran'ny mandrakizay ny olona dia miankina amin'ny fahombiazana na ny tsy fahombiazan'ny asantsika evanjelika.
Hoy i Jesosy: “Aiza izay ray eo aminareo izay mangataka trondro, dia hanolotra bibilava ho an'ny trondro ny zanany? … Raha ianareo ratsy dia afaka manome fanomezana tsara ny zanakareo, tsy mainka ve ny hanomezan'ny Ray any an-danitra ny Fanahy Masina an'ireo manontany azy! » (Lioka 11,11:13 sy).
Ny marina dia tena fanontanian'i Jaona amintsika: tena tia an'izao tontolo izao Andriamanitra. «Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny Zanani-lahy tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Satria Andriamanitra tsy naniraka ny Zanaka ho amin'izao tontolo izao hitsara izao tontolo izao, fa mba hamonjy an'izao tontolo izao amin'ny alalany » (Jaona 3,16-17).
Hoy i Jesosy: «Fa sitraky ny raiko ny hananan'izay mahita sy mino ny zanaka hanana fiainana mandrakizay; ary Izaho hanangana azy amin'ny andro farany » (Jaona 6,40).